တရုတ်က ဖိ၊ ကုလားက အိနှင့် ရှိသည့်ဗမာ ယိုးဒယားမှာ | MoeMaKa Burmese News & Media
မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၁၂
13 Responses to တရုတ်က ဖိ၊ ကုလားက အိနှင့် ရှိသည့်ဗမာ ယိုးဒယားမှာ
b338637 on March 17, 2012 at 9:19 pm
တရုတ်က ဖိ၊ ကုလားက အိနှင့် ရှိသည့်ဗမာ ယိုးဒယားမှာ ဖါဖြစ် ကျွှန်ဖြစ်။
one more on March 18, 2012 at 3:46 am
မလေးရှားမှာလဲ ရှိပါတယ် နော်..ယ ပက်လက်မှာ ဘဲ မဟုတ်ပါဘူး..မယုံရင်လာကြည့်
NAI KYAW SEIN on March 18, 2012 at 5:22 am
အပနားတွေလည်း ၇ခိုင်ဒေသေ၇မြေတွေဘက်ကိုအိလာ တ၇ုတ်တွေလည်း မြစ်ဆုံေ၇ကာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးအထက်မြန်မာပြည်ကချင်ဘက်ကဖိလာ အိလာ လက်၇ှိအုပ်ချုပ်သူတွေကလည်း ပြည်တွင်းကခေတ်အဆက်ဆက်ဘိုးဘွားပိုင်လယ်တွေ ယာတွေ ကျေး၇ွာတွေပါလိုက်သိမ်း လိုက်ပြောင်းေ၇ွ.ခိုင်းနေမှတော့ ပြေးပါတော့အဝေးဆီကို
Dove on March 18, 2012 at 7:46 am
Unless Aung San Suu Kyi can help the poor, in real terms, the Burmese situation will become unstable. Chinese and the military- beware!
super on March 18, 2012 at 8:10 am
စလုံးမှာလဲ၇ှိတယ်။ အင်တာနယ်၇ှင်နယ် ဖာနိုင်ငံပေါ့နော်။ ။
xxx on March 18, 2012 at 9:32 am
sushi on March 18, 2012 at 10:30 am
အမေရိကားမှာလည်းရှိပါတယ် နေ့ ကောညကော တစ်ရက်မှမနားရပဲ တစ်ပတ်7ရက်လုံးလုပ်နေရတဲ့ စက်ရုပ်လူသားမြန်မာတွေလေ
Rakhine Kalar on March 18, 2012 at 3:18 pm
Great cartoons and great comments…Salute,,,,Bravo,.,,,,
mickynaing on March 18, 2012 at 5:02 pm
ကျုပ်တို့ မြန်မာယူရိုပီယမ်တွေကော ဘာတွေလုပ်နေကြရလည်း ခင်ဗျာ၊ ရရာလေးလုပ်ပြီး ပြည်တွင်းမှာ ရှိနေတဲ့မိသားစုတွေကို ထောက်ပံ့နေကြရတာ အများစုပါ၊ သိန်းတစ်ရာနဲ့ ဆိုက်ကားထောင်မစားနိုင်တဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးလောကကိုကြည့်ပြီး မပြန်ရဲကြပါဘူးဗျာ၊
Au on March 19, 2012 at 1:58 am
ဒုက္ခသည် on March 19, 2012 at 7:26 am
အားလုံးကတော့ ယိုးဒယားမှာ ခေတ္တ ခဏ နေဖူးကြမယ်ထင်တယ်။
oomxymru on March 19, 2012 at 12:59 pm
မေခလာရဲ့ သီချင်းလေး ဟဲလိုက်မယ်၊ တရားခံ ဘယ်သူလဲဟေ့ ပြော…….။
Phar gaung on March 21, 2012 at 5:49 am
Kyosar kya pot kwar.